I-Bruny Sea House - I-Airbnb
I-Bruny Sea House
IBruny Sea House ibekwe ngaselunxwemeni lwamanzi, ejonge iSatellite Island, iBruny Sea House imele ibavuyise abo bafuna ukuzola baze baphumle.
Sebenzisa ii-kayaks zaselwandle ukuze ubuke unxweme, uhlale everandeni uphole okanye ubukele ilanga elimangalisayo langokuhlwa. E-Bruny Sea House uza kusiwa kwindawo yendalo apho ungashiya khona isiphithiphithi sobomi besixeko kwaye ungene ngaphakathi kwisiqithi sokuhlala.
Le ndawo yokuqala engaselwandle yango-1950 inembonakalo entle ejongene neD 'Entrecasteaux Channel kuwo onke amagumbi. Ihonjiswe kakuhle ngamagumbi okulala amathathu, indawo yokuhlala etofotofo eneendawo zokuphumla ezipholileyo kunye nento yokufudumeza iinkuni, ikhitshi elipholileyo kunye negumbi lokuhlambela kunye nomgangatho omkhulu wokutya okuqhelekileyo.
Iifenitshala ezihonjiswe kakuhle, ezinezinto zebhedi ezimfumamfuma, izinto zebhedi zakudala kunye nengqokelela yezinto ezisecaleni kolwandle zibonisa indalo zize ziphucule izinto onokuzonwabela ezikhululekileyo.
I-Bruny Sea House ikumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kwiHotel Bruny apho ukutya okumnandi kusetyenziswa imveliso yasekuhlaleni kwisidlo sasemini kunye nesangokuhlwa iintsuku eziyi-7 ngeveki. Ukuba usemva kwemini uphumle, uza kuhamba imizuzu eyi-5 ukuya kwi-Bruny Island Wery entle ukuze ufumane isidlo sasemini nesiselo, ufanele utyelele. Indawo ephakathi yeBruny Sea House iza kubona ukuba ukutya okufreshi kunye nemveliso yesiqithi saseBruny kulula ukuyifikelela. Yonwabela itshizi yesiqithi saseBruny, Get Shucked Oysters, iHoney Pot, iFudge Factory kunye neBerry Farm, zonke zingekapheli imizuzu eyi-15 ngemoto. Ngaphezulu kancinci kukho uhambo oludumileyo lwePenicott Wilderness kunye nendlu ekhanyayo yokubona imbali kunye nonxweme lwesiqithi.
Ukuba yindawo yendalo, izilwanyana zasendle kunye neentaka ezigqwesileyo, ezibangela umdla, ngoko kukho iindlela ezininzi zokuhamba ezilungele onke amanqanaba okuzilolonga, eziqinisekisa iindawo ezintle kakhulu kwaye kulula ukufikelela kuzo iBruny Sea House.
IBruny Sea House ilungele abantu abathandanayo okanye iintsapho ngokufanayo. Izilwanyana zasekhaya zamkelekile kwaye kukho iyadi ekhuselekileyo ukuze ube noxolo lwengqondo.
Sikhangele phambili ekukwabelaneni nawe ngeBruny Sea House nokwenza utyelelo lwakho lube mnandi kwaye lube mnandi.
4.87 · Izimvo eziyi-221
IAlonnah yidolophu ethandwayo ngabantu basekuhlaleni njengoko ineHotel Bruny, amaziko ezonyango kunye nesikolo. Ikwindawo ephakathi kwesi siqithi esenza kube lula ukufikelela kwiziqithi ezisemntla nezasezantsi.
Inombolo yomthetho: DA2019/675